Oosaziwayo ngeenwele ezinde- Iindlela eziThanda abantu abaDibeneyo | Amadoda aQinisekileyo
Idume ngeenwele ezinde
UAlicia tomero | | fashion, Imizila
Abantu abadumileyo bahlala bedala iintsingiselo, nokuba banxibe iimpahla zabo ezinesitayile, ukujonga nokuzilungisa, okanye iinwele. Amadoda kwesi sithuba amele loo manes yokuyila, ethi phawula ubuntu babo kwaye ubenze babe yindoda kakhuluKungenxa yoko le nto siqala kwisiseko sokuba zihlala zikhuthaza kwaye zisebenza njengomzekelo wokukukhuthaza ukuba uphathe iinwele ezinde.
Inkolelo yokuba iinwele ezinde ayizizo ezamadoda ayiphawuli umthetho omiselweyo. Nokuba iminyaka ithathe ixesha elingakanani okanye izizukulwana ziyekile ukuthwalwa zizo zonke iindidi zentlalo. Abantu abadumileyo abaneenwele ezinde ngakumbi nangakumbi kunokwenzeka ukuba bazinxibe kwimisebenzi yabo, siyayazi loo nto Zibukeka ziqaqambile kwaye zilungiswe kakuhle Kungenxa yoko le nto siza kukunika amaqhinga ukuze wazi ukuba uza kukhathalelwa njani.
1 Abantu abadumileyo abanesiqingatha senwele
2 Idume ngeenwele ezinde kunye neun Mun
3 Idume nge-surfer hairstyle
4 Unonophelo lokuba neenwele ezinde ezinde
Abantu abadumileyo abanesiqingatha senwele
Le ndlela yokwenza iinwele ayiyiyo inde kwaye ayiqhele ukunxitywa ezantsi kwesilevu. Inganxitywa ngokuthe tye, egobileyo okanye egalelwe kwaye ngokungathandabuzekiyo kukucheba iinwele okungakhethwanga bubuhle beenwele ezinde kakhulu. Izitayile ezinokufezekiswa zahluke kakhulu, kuxhomekeke kuhlobo lweenwele ezinokunxitywa kwelinye icala, kwahlulwa embindini okanye ngasemva.
Abantu abadumileyo esibakhethileyo sisiqingatha seenwele UChristian Bale ngeenwele zakhe emagxeni, apho kubonakala ngathi uxakekile, kodwa ugcina ubuhle bakhe. Keanu Reeves ngomnye wabantu abadumileyo ababhejayo kwizinwele eziphakathi iminyaka emininzi, ngeenwele ezithe nkqo. UBrad Pitt Nguye obeka imeko ngeenwele zakhe ezinesiqingatha kwaye asinakulibala umdlali weqonga Kit Harington kwindima yakhe njengoJon Snow kwiMidlalo yeTrone.
Idume ngeenwele ezinde kunye neun Mun
Imane ende ijongeka ngathi inesitayile xa uzilungisile kwaye ayinangxaki. Kukho amadoda ayaziyo indlela yokuyinxiba ngobuhle kunye nobuchule kunye nabantu abaninzi abadumileyo abangathathi mzamo omkhulu. UBrad Pitt Uye wanikezela phantse wonke umsebenzi wakhe wokunxiba iinwele ezintle, ezinokusikwa kunye nobude obahlukeneyo, kodwa uhlala ebonisa ukuba kujongeka njani kuye ngekratshi.
UJason Momoa Uphantse waziwa kakhulu ngeenwele zakhe ezinde njengomdlali weqonga kunye nokukhokela IAguaman, apho loo surfer mane intle kunye neenwele ezijijekileyo kunye neempawu ezi-blonde ezingcolileyo zijongwa lilanga. UChris hemswoth ngomnye umdlali weqonga onxibe iinwele ezintle apho angenise khona intshukumo kunye nokubizwa njalo amagqabantshintshi Isitayile esinenwele yimvumi ehlala ikhetha isitayile sayo sasezidolophini kunye nokungaqhelekanga kunye neenwele zayo ezimdaka, ezinamatye.
Inwele ye-Mun Luhlobo lweenwele zamadoda aneenwele ezinde. Icacile yindlela yayo elula yokwenza, kodwa kwangaxeshanye inika ubuhle kunye nesitayile. Kuya kufuneka uqokelele iinwele emva kwaye yenza ngokusesikweni nge-bun okanye ngololiwe ophindwe kabini. UJared Leto ngulo ubhejayo ngale ndlela, ukuze akwazi ukuya emsebenzini okanye ukuhamba ekhaphethini.
Idume nge-surfer hairstyle
Sele sichazile UJason Momoa nge-surfer mane yayo kwaye le ndlela ibonakaliswa ngokuba nemane ephakathi okanye ende, iinwele ezikhanyayo kunye ne-wavy. Eyona fomu yayo yendalo kuxa i Umbala we-blonde uphelelwe lilanga, kodwa inokufezekiswa ngokugqibeleleyo ezandleni zaso nasiphi na isitayile. Eyona ndlela yokuyinxiba ngokwendalo kwaye ngaphandle kokumakisha kuyo nayiphi na imigca, uyivumele ukuba iwele ngokwendalo emacaleni kwaye uyimakishe ngejel encinci.
UAustin umngcamli Wayenxibe iinwele zakhe ezi-surfer ngalo lonke ikratshi, ezibandakanya izintlu zabantu abadumileyo ngeenwele ezinde. Iinwele zakhe zinegalelo elihle neline-blonde, kodwa ziphawulwe ngesimbo se-surfer kunye ne-wavy esenza ukuba ibe nokuhanjiswa okungaphezulu. Josh holloway Uye wanxiba iinwele ezinde kwi-surfer medium ixesha elide, enefuthe elinomdla kakhulu. Asinakulibala malunga UDavid Beckham kunye neminyaka yakhe yeenwele ezinde eziseta iintsingiselo kunye nombala wegolide o-blonde.
Unonophelo lokuba neenwele ezinde ezinde
Akunyanzelekanga ukuba wenze umzamo omkhulu wokukhathalela ngokufanelekileyo, yiba nomonde kwaye wenze unonophelo rhoqo. Ukuhlamba kufuneka kwenziwe ngcono kakhulu rhoqo emva kweentsuku ezimbini okanye ezintathuUkuba kunokwenzeka, thintela ukuhlamba imihla ngemihla ukuze ungacaphukisi isikhumba sekhanda kwaye ubangele ukoma kweenwele.
Sebenzisa ishampu efanelekileyo kwisitayela sakho seenwele, nokuba ijikekile, ithe nkqo, inkwethu, yomile okanye ineoyile. Kukwacetyiswa kanjalo Ukusetyenziswa kwesixhobisi i-hydration efanelekileyo. Xa uza kuyisebenzisa, thambisa ngobunono entlokweni kwaye uhlambe iinwele ekugqibeleni ngamanzi abandayo ukutywina ii-cuticles. Zomise iinwele ekugqibeleni bamba iinwele ngetawuli.
Kanye ngeveki kuyacetyiswa ukuba usebenzise imaski yokulungisa kunye nokunika amandla ngakumbi. Xa unika umnwe wokugqibela ezinweleni ungasebenzisa ijeli okanye i-wax, kodwa ungazisebenzisi ezi mveliso kuba ziyoma kwaye zonakalise iinwele ukuba zisetyenziswa kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » Idume ngeenwele ezinde
Iimpawu zokubukela ezintle
Iinwele zakudala kunye nokusikwa kwamadoda